Mety amin'ny fiarako ve ny Saris Bones 2? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Saris bone 2 famerenana - vahaolana amin'ny
Saris bone 2 famerenana - vahaolana amin'ny
Mety amin'ny fiarako ve ny Saris Bones 2?
mifanentana90% amin'ireo fiara ambony namidy, ao anatin'izany ireo manana mpanimba.
Ianao dia bandy Brendon McCray eto indray ho an'i Mini Mania ary anio dia manao demo izahay hametraka an'i Tesaris dia kitapo bisikileta tokana lafo vidy ho an'ny fiara kelinao no hapetrakay amin'ny Mini anay eto, atoro anao anao ny fomba ny fanaovana azy dia fitoeram-bisikileta kely dia kely angamba izy io mety ho iray amin'ireo kely indrindra hitanao fa maivana ary tena lafo vidy ny mifaninana amin'ny vidin-bisikileta rehetra eny an-tsena ka aleo apetraka amin'ny mini dia ho hitako asehoy anao ny fomba fiasan'ity zavatra ity Ny dingana voalohany hataontsika dia, rehefa apetratsika amin'ny fiara ity, ireo toppads ireo dia hipetraka eo ambonin'ny vera eo ambany dia hipetraka eo ambonin'ny metaly ary hiezaka izahay hino tsara fa ity andohalambo ity mandeha eo afovoan'ny vodilaharana wiper aotrikao avy eo, ary avy eo dia raisinay ireo fehin-kibo ary mandeha eo ambanin'ny mpandroba izay misy ireo rakipeo mainty miloko ireo, ary avy eo dia mandeha mahitsy mankamin'ilay banga ho an'ny tailgate aorian'ny hametrahantsika azy amin'ny fiara. R hanokatra ny lamosina eto isika ary hametraka ny clip misy antsika ary hanamboatra ny tadin-tsika amin'izany fomba izany, hihazona tery tsara ary hanidy fotsiny ny tail tail rehefa vita indray ianao dia hiala sasatra faharoa fotsiny aho sisa tavela amin'ny tadiny, ary hamatotra fehezam-boninkazo kely fotsiny aho mba tsy hiarovan'ny rivotra isika fa efa napetraka avokoa ny fetra mavesatra eo amin'ny fitoeran'ny bisikileta 35 kilao mahery ity bisikileta ity eo anelanelan'ny 32 sy 33 pounds ka mety mety amin'ny fetra farany ambony lanja ary ho hitanao fa eto ihany ireo teboka roa mifamatotra ireo izay mipetraka ao anaty fihinanam-bilona mba hiteny ary tena manampy tokoa raha toa ny baoritra ataon'ny bisikiletanao fotsiny. , mety mila mampiasa adaptatera ianao raha manana endriny fanao na endrika hafa, hasehoko anao fotsiny ny fomba hanaovana azy, enao ny tadinao ary eo ianao manana izany tianay ny sar a solo satria io no lafo indrindra amin'ny fifaninanana talantalana bisikileta azonao jerena eny an-tsena ary hitanao fa mora ny mametraka azy raha tianao ny o ho anao manokana dia afaka mandeha amin'ny tranokalanay izay wwm ao E mania comm mankany amin'ny pejy newmini ary manorata ny fizarana G amin'nyNMA 3500
Saris Bones ve fatin-bisikileta tsara?
Nandritra ny taona maro, nyBisikileta Saris BonesvatanyMitrosaefasarisa'fiara be mpividyMitrosa. Miaraka amin'ny arched miavakaMitrosafitaovam-piadiana, fanamboarana avo lenta ary fivarotana amn'ny vidiny mirary, nyTaolananahatonga ny lalana mankany amin'ireo làlana maro azo tratrarina ho an'ny fianakaviana maro.12 feb 2021
Azonao atao ve ny manokatra ny vatan-kazo amin'ny Saris Bones?
SATRIAmanokatra ny vatan-kazomiaraka amina talantalana apetraka amin'ny fiaraafakamiteraka fahasimbana,ataontsikatsy manoro hevitramanokatra ny vatan-kazomisy fiara raha avatanynapetraka ny talantalana.6 Aogositra 2019
Manakodia fiara ve ny Saris Bones?
nySaris Bonesohatra (izaysarisamanamafy fa tsy mety amin'ny anaofiara) manana tongotra kely kokoa, izay mampihatra ny lanjan'ny talantalana rehetra sy ny bisikileta amin'ny faritra kely dia kely. Ny ankamaroan'ny fitoeran'entana dia mampiasa farango 6 hametahana azyfiaran'ny fiaravatan-kazo, izay mety hiteraka koarangotra.30 apr 2016
Sarisin'ny taolana Saris Bones ve ny takelaka?
Milamina tsara ny bisikiletany, ary maro no azo hidim-baravarana. Tsy manao izany izy ireomisakanany fijerinao, ary ny anaotakelaka laharanasy jirodiambola ho hita.
Manimba ny fiaranao ve ny valin'ny bisikileta?
vatany-metytalantalana bisikiletamanana ny mety lehibe mahatonga nyfahavoazananyny fiaranao. Ity karazanatalantalana bisikiletamipetraka manohitra nyfiaraloko sy fehy amin'ny sisin'nyvatany. Hatramin'ity karazanaMitrosamifandray foanany fiaranao, afaka mikosoka aminy izy io ary miteraka ratra.
Mandroaka ny fiaranao va ny bisikileta bisikileta?
Mitaingina vatan-kazotalantalana bisikiletamanana ny hery anaty lehibe indrindranyniterakafahavoazananyny fiaranao. Ity karazana ityny talantalana bisikiletamipetraka manohitra nyfiaraloko sy fehy amin'ny sisinynyny vatan-kazo. Hatramin'ity karazana ityny talantalanamifandray foanany fiaranao, afaka mikosoka azy io ary miterakarangotra.
Manimba fiara ve ny fitoeran'entana bisikileta?
Mitaingina vatan-kazotalantalana bisikiletamanana ny mety lehibe mahatonga nyfahavoazanaamin'nyfiara. Ity karazanatalantalana bisikiletamipetraka manohitra nyfiaraloko sy fehy eo amin'ny sisin'ny vatan-kazo. Hatramin'ity karazanaMitrosamifandray aminao foanafiara, itafakamanosotra manohitra azy ary miteraka ratra.
Manimba ny fiaranao ve ireo mpitatitra bisikileta?
Ny valiny tsotra dia, tsy voatery. Raha mbola azo ataomanimba ny fiaranaorehefa mametraka atalantalana bisikileta, ny marina dia tsy voatery ho toy izao. Raha ny marina, raha vao mianatra fika tsotra vitsivitsy ianao ary mianatra manisy atalantalana bisikiletaara-dalàna, tsy tokony hisy izany.
Manimba ny fiaranao ve ny valin-drihana?
Fitaovana mety sy ampiasainatampon-tranohanome serivisy maimaimpoana mandritra ny taona maro ary tsy hanome izanymanimba ny fiaranao. Fitaovana mahery vaika, ambany torifana, mety tsara na be loatratampon-tranoafakamanimba ny fiaranao. “Raha avela eony fiaranao,fitoeran-tranonaodia haseho amin'ireo singa, ary vokatr'izany dia afaka mihaona ny fittings rehefa mandeha ny fotoana. Novambra
Karazana taolana bisikileta inona no taolana saris 2?
Ny hevi-dehibe ao amin'ny Saris Bones 2 Bike Rack Review dia ny hoe raha mila tadin-bisikileta afaka mifanentana amin'ny karazana bisikileta rehetra ianao ary hitazona azy ireo ho voaro amin'ny arabe amin'ny karazana fepetra rehetra, aza mitady lavitra intsony fa ny Saris 'Bones 2 ″.
Inona no mampiavaka ny saris Bones ex 3?
Izahay dia nisedra ny Saris Bones EX-3 ary hanarona an'io rakotra io mandritra ny sisa amin'ity famerenana ity. Misy endrika roa an'ny Saris Bones EX izay manavaka azy amin'ny fitoeran-kazo hafa eny an-tsena. Voalohany, ny Bones EX dia mety tafiditra amin'ny fiara maro noho ny valizy maro hafa.
Inona avy ireo fehy amin'ny bisikileta saris?
Tady plastika telo no ampiasaina hifehezana ny bisikileta eo amin'ny fantsona ambony sy fantson'ny seza. Ity famolavolana ity dia mety amin'ny fitondrana bisikileta misy endrika telozoro eo anoloana nentim-paharazana sy fantsona ambony mitsivalana. Mampitandrina ny amin'ny fampiasana tsy eny an-dàlana i Saris, toy ny fanaon'ny mpanamboatra talantalana rehetra, fa mandeha lavidavitra kokoa kosa, milaza fa tsy natao ho an'ny hafainganam-pandeha mihoatra ny 65mph ny talantalana.